Sida Loogu Sameeyo Kalandarkaaga Kalimadaada Mawduucyo Bilaash ah - Tilmaamaha Teknolojiyada | Golaha Moobaylka
Qolka Ignatius | | Microsoft Word, Qalabka otomaatiga
Codsiga kalandarka ee ku saabsan aaladaha mobilada iyo kombiyuutarada ayaa ka mid ah kuwa aan inta badan u isticmaalno qoritaanka dhammaan kuwa aynaan rabin in la iloobo oo marka maalinta la aasaasay la gaaro, aan helno ogeysiis. Iyadoo aan laga hadlin kalandarrada la wadaago, habka ugu wanaagsan ee dhammaan dadka la xiriira ay u leeyihiin aqoonta dhacdooyinka, ayaa loo maraa jadwalka qaabka jirka.
Dhammaanteen waxaan tagnay aqoon isweydaarsi farsamo halkaas oo aan ku aragnay dumar jilicsan oo jadwallo waaweyn kujira. Kalandarradan, oo leh qaab DIN A3, ayaa ku habboon cabbirkooda si ay u sameeyaan fasiraadno u muuqda qof walba. Si kastaba ha noqotee, way sii adkaaneysaa helitaankooda, taas oo nagu qasbeysa abuuro jadwalkeena hadaan raadineyno kalandar balaaran.
In kasta oo ay run tahay inaan gacanta ku hayno codsiyo aad u tiro badan oo internetka ah oo noo oggolaanaya sameyso jadwalka taariikhda si deg deg ah oo fudud, xulashooyinka habayntu aad bay u kooban yihiin. Dhibaatadan, waxaa jira xal aad uga fudud intaad filan karto: Microsoft Word.
Ereygu wuxuu noo ogolaanayaa inaan abuurno nooc kasta oo dukumiinti ah, laga bilaabo boodhadhka illaa loo maro WordArt ilaa gali jadwalka iyada oo loo marayo nidaamka miiska. Thanks to miisaska, waxaan abuuri karnaa kalandar cabbir kasta leh oo ku habboon baahiyahayaga.
1 Tallaabooyinka lagu abuurayo kalandarka ku jira Ereyga
1.1 Deji cabbirka kalandarka
1.2 Samee jadwalka martigelin doona kalandarka
2 Abuur jadwal ku jira ereyga oo laga soo qaatay shax
Tallaabooyinka lagu abuurayo kalandarka ku jira Ereyga
Deji cabbirka kalandarka
Kalandarka-cabbirka cabbirka wuxuu ku habboon yahay in lagu dhejiyo derbiga oo laga eego labada maalmood ee usbuuca iyo sharraxaadaha aan dejinnay. Si kastaba ha noqotee, cabirkiisa awgeed, waa inaan si dhow u aragnaa, markaa haddii ujeeddada jadwalka ay tahay inuu ku yaal meel laga arki karo, cabirka tani waa inuu weynaado. Cabirka loo dejiyey dhammaan dukumintiyada Ereyga waa A4.
Si wax looga beddelo cabbirka dukumentiga aan ku abuuri doonno dukumeentiga, waa inaan gujineynaa xulashada Bixinta, oo ku yaal xigashada sare, markii dambena ku jirta Cabbirka. Haddii cabbirka aan raadineyno uusan ka mid ahayn xulashooyinka caadiga ah ee la muujiyay, waa inaan gujinnaa Cabirrada waraaqo badan oo deji cabirka aan ugu baahan nahay gacanta.
Haddii cabbirka kalandarka aasaasiga ahi aanu ahayn A4, marka daabacaadda dukumintiga, waan ku samayn karnaa go'yaal badan, dejinta daabacaad aan xad lahayn, ka dibna ku soo biir iyaga. Ama, waxaan aadi karnaa dukaanka nuqul si loogu daabaco cabbirka aan dooranay.
Samee jadwalka martigelin doona kalandarka
Ugu horreyntii, si aanan wax uga beddelin miisaskii horey loo sameeyay (oo markaa looga fogaado khaladaadka) oo aan u sameysno jadwal bilaha sanadka oo dhan, waa inaan deji bog ka duwan bisha sanadka.
Markaan dhammeyno sameynta jadwalka bisha ugu horreysa, waxaan riixnaa furayaasha Xakameyn + Gal, si toos ah loogu aado bogga xiga (haddii aan riixno furaha gala si aan u abuurno bog cusub, isbeddel kasta oo aan ku sameyno jadwalka wuxuu saameyn ku yeelan doonaa bogagga intiisa kale). Sadarka ugu horeeya (saf ma ahan) waa inuu muujiyaa bisha kalandarka.
Jadwalka kalandarka ku jiri doona waa inuu ka koobnaadaa 7 sadar (oo u dhiganta maalmaha toddobaadka) iyo 7 filas (6 oo u dhiganta tirada ugu badan ee suurtogalka ah ee toddobaadyo ee bil yeelan karto iyo mid kale oo lagu dhiso maalmaha toddobaadka).
Si tan loo sameeyo, waxaan aadeynaa ikhtiyaarka Geli cajalad oo riix Shaxda xulashada tirada miisaska iyo tiirarka aan rabno inaan adeegsanno (7 × 7).
Marka xigta, ka hor intaan la qaabeynin miiska, waa inaan kudar maalmaha usbuuca safka hore. Marka xigta, waa inaan ku dhammaystirnaa unugyada maalmaha usbuuca u dhigma bil kasta.
Hadda waxaan codsaneynaa qaab miiska. Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa xulashada miiska oo dhan. Kadibna cajaladda Naqshad, dhagsii qaababka asalka ah ee Ereygu noo diyaariyo si aan u qaabeyno miiska aan abuurnay.
Kahor xulashada qaabka aan ugu jecel nahay, waa inaan calaamadee sanduuqa safka koowaad oo calaamadee safka ugu dambeeya, si khaanadda u dhiganta Axadda oo aan Isniinta loo tusin hadh. Xulashadani waxay ku taal dhinaca midig ee naqshada Naqshada.
Marka xigta, waa inaan tirtir safafka aynaan u baahnayn. Si tan loo sameeyo, waa inaan dooranaa oo aan riixnaa badhanka midig oo aan dooranaa Delete ee qaabka macnaha guud ee la soo bandhigay.
Ugu dambeyntii, waa inaan deji dhererka aan dooneyno inaan adeegsanno maalmaha usbuuca, si ay u awoodaan inay sameeyaan sharaxaad, haddii kiisku yimaado. Xalka ugu fudud ee sidaa lagu sameyn karaa waa in la riixo gala maalin kasta sidaan u qoreyno. Mid kale, xalka dhaqsaha badan wuxuu ku yimaadaa sifooyinka miiska.
Si aan u helno sifooyinka miiska, waxaan doorannaa safafka halkaasoo maalmaha la soo bandhigayo, dhagsii batoonka midig oo dooro Guryaha miiska.
Marka xigta, dhagsii tabta Safafka, waxaan calaamadeynaa sanduuqa Sheeg dhererka, Waxaan dejinay dhererka la doonayo iyo xulashada Dhererka safka waxaan xulanaa ikhtiyaarka Xaqiiqada. Ugu dambayntii waxaan gujinaynaa aqbalaadda tanina waxay noqon doontaa natiijada.
Qolka ku xiga 31-aad waa Sabtida. Si aanan ugu jahwareerin sidii maalin kale oo kaleendarka ah, waxaan midab ku midabeeyey kan isku midab sida axada. Si aan ugu buuxiyo qolka midab isku mid ah Axadii, waxaan dul dhigay astaamaha qolka, waxaan dhagsiiyey batoonka midig ee jiirka waxaanan dhagsiiyey dheriga rinjiga, kadibna waxaan dooranayaa isla midabka ka muuqda safka Axada.
Abuur jadwal ku jira ereyga oo laga soo qaatay shax
Ma ahayn illaa Xafiiska 2016 markii Microsoft ay si dhab ah ula socotey, markii ay u timid inay bixiso moodello nooc kasta leh. In kasta oo ay run tahay in mid kasta oo ka mid ah codsiyada ka tirsan Office 365 ay na siinayaan tiro kooban oo arrimo ah, kuwan ma buuxinayaan dhammaan baahiyaha isticmaalaha.
Xalka dhibaatadani waxay ahayd in la abuuro degel ay adeegsadayaashu ku isticmaali karaan raadi oo soo dejiso sheybaarada gabi ahaanba bilaash. Websaydhkani wuxuu naga dhigayaa tiro badan oo ah arrimo lagu qeexay mawduuc iyo halka lagu daro tusaalooyinka jadwalka, waxaan sidoo kale ka heli karnaa tusaalooyin joornaalada, liisaska, xusuus-qorrada, menus, payroll, qaansheegta, rasiidhada, miisaaniyadaha, bandhigyada ... illaa 35 qaybood.
Moodellada la heli karo ayaa loo heli karaa Ereyga, Excel ama PowerPoint oo badankoodna, waxaan ka helnaa macros noo oggolaanaya wax ka beddel xogta template adoo adeegsanaya sanaadiiqda hoos loo dhigo si aanan ugu khasbaneyn inaan gacan ku beddelno xogta la soo bandhigay.
Kalandarka ereyga, leh qasabno yar, waxaan haysan karnaa jadwalka u dhigma bil kasta oo la diyaariyo iyada oo aan loo baahneyn sameynta jadwallo, qaabeynno, buuxi unugyada ...
Dhammaan mawduucyada, waxaan u habeyn karnaa sida aan jecel nahay, illaa iyo inta aynaan wax ka beddelin meelaha la xiriira macros-ka. Macros ee dukumiintiyada Xafiiska waxaa ku jiri kara fayrasyo, sidaa darteed markasta oo aan dokumenti ku furno qaabkan, way naafo yihiin.
Maaddaama dhammaan qaababkani ka yimaadeen oo ay saxeexday Microsoft, fayrasku ka xor yahay, sidaa darteed wax khatar ah uma galineyno inaan awoodno markaan furaneyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Qalabka otomaatiga » Sida loo abuuro kalandarkaaga gaarka ah ee ereyga
Sida loogu cadaadiyo PowerPoint tillaabooyin fudud